Yiba noSuku lweeNkcukacha zeMithombo yeendaba ephefumlelweyo-iGeofumadas
Sukuphefumlelwa Ngomhla woLwazi lweNgcaciso
NgoNovemba, 2011 Microstation-Bentley
Ngoku sinomhla wokuqala, ngaphambi kokuba Uphefumulelwe, esenzelwe ukushicilela; kunye neendlela ezibaluleke kakhulu ukuba iBentley Systems ilindele ukuhamba kwinqanaba leendaba.
Okwangoku, ukuqala kwam kuqala.
Iipointools zibonakala njengeyona nto ifanelekileyo yokufumana iBentley, ngokoluvo lwam. Inkampani ebalulekileyo apho i-CEO yangaphambili ye-Bentley, uJoe Croser, waya khona, umsebenzi onomdla, apho kungekuphela nje umdla weBentley kunye ne-AutoDesk eyashukumisela ukusebenzisana ngokubambisana ekulawuleni idatha yeenkcukacha zefu kodwa kunye nesicwangciso Inkxaso engathathi hlangothi kunye nababoneleli abaphambili bezixhobo zokubamba idatha
I-Bentley Descartes V8i ibizwa ngokuba yi-DTM kwii-steroids. Kwaye i-Bentley ibonakala ngathi iya kuqhayisa (kwakhona) isizathu sokuba uninzi lwabasebenzisi bayo abanyanisekileyo bayayithanda: ukuqina kweqonga lokusingatha idatha kubhabho. Ke amanqaku angama-680 ezigidi, kwimodeli yendawo yedijithali kunye ne-orthophoto edutyulwe kwi-TIN, enokusondeza ngamandla kunye nepani kunokuba ngumzobo omkhulu weV8i.
Olunye uhlobo luphawulwe kwii-Hypermodels, indlela yokubiza i-BIM phantsi kwesiseko sokulibala iiplani ze-2D, ukuphatha ukusikwa kunye nokuwela amacandelo ngalo naliphi na ixesha kwaye inamandla ngokupheleleyo. Ngale nto, ukudityaniswa kwezicelo ze-geotechnical, uyilo lwejiyometri lweendlela, uyilo lolwakhiwo kunye nokulinganisa ukusetyenziswa kwamandla ngumsi. Ndathetha malunga nayo kwiminyaka embalwa edlulileyo, kwaye ingumzekelo owodwa, kungakhathaliseki ukuba bangaphi abantu okanye izicelo ezichaphazela iifayile ... Omnye Umzekelo ... Iinkonzo ezininzi.
Umkhwa uyaqhubeka kwinkqubo epheleleyo yokudala, ukupapasha, ukukhusela kunye nokuhambisa idatha ukusuka kwidesktop ukuya kwilifu, ngaphandle kokucinga ngeefayile kodwa ngeemodeli zokwenyani. I-Bentley ibeke iMicrostation kakuhle, ngoku ifuna ukuyenza ngeProjekthiWise ... kwaye ngelixesha iya kuba yi-AssetWise ... nangona ingekabikho.
Kwaye okokugqibela, nangona imva kwemini isencinci, ukuhamba kuyinto engalungisekiyo. Umdibaniso okanye ukufunyanwa kwe-AECO kunye neTekla kubonakala ngathi kukhulile ngaphaya kwezicelo ezilula ezithunyelweyo kwi-ApStore ye-iPad. Isakhono sikwiProjekthiWise, apho bafuna ukuthatha ulawulo lwedatha kubo I-imizekelo kumxholo wokusebenzisana oza kunceda wonke umntu.
Okunye ukufunyanwa okunje ngeFormsys kuthatha ulawulo lweenkqubo zepetroleum ngakumbi, ngoku kubandakanya amaqonga adadayo. Kwimeko yolawulo lweRaceway kunye neCable, lolunye uqikelelo lwengcinga ye-BIM, apho phantse yonke into ixhunyiwe njengelizwe lokwenyani.
Itsalela ingqalelo kwimanyano ebalulekileyo, enje ngemeko ye-AutoDesk yokuba ixesha elide iqhubeka ilawulwa njengeqabane elinobuchule kunokuba ikhuphisane (kucingelwa), ngaphambi kokuba bathethe ngokudityaniswa kweRevit, ngoku bakhankanya i-Civil 3D. Ukusebenzisana kuyangqina kwaye kuyaqondakala zizinto ezibini ezikhulu, nangona yonke imihla sibona ukusondelelana okungakumbi neMicrosoft, abanokuthi kwixesha elizayo babe nefuthe elibalulekileyo kuba iBentley Systems iqhubeka nokuba yinkampani enkulu kwihlabathi kwintloko yelifa lemveli (yintoni ilifa ).
Malunga nabameli bamajelo eendaba abangama-70 abavela kumazwe angama-20 balapha ukuze baqiniseke ngamehlo ethu. I-iPad ibonakala ngokucacileyo, iya ixhaphaka ngabahleli, nayo i-tweeter, lungcono kunonyaka odlulileyo; i-hashtag yi-#BeIn2011 kwaye unako ukuqhubeka uqaphela phantse kwiminithi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini IGeofumadas ... ngokoqobo kubhabho
Post Next Ngaba siya kuba neMicrostation yeMac?Okulandelayo »